China API 5LGr.B Warshada Dhuumaha Rinjiga Madow iyo alaab-qeybiyeyaasha |XUANZE
API waa soo gaabinta Machadka Batroolka Mareykanka.Waa urur warshado saliid Maraykan ah oo bixisa xogta muhiimka ah ee toddobaadlaha ah ee isticmaalka saliidda Maraykanka iyo heerka alaabada.
API5LGR.B Tuubooyinka khadka waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado saliidda, uumiga, iyo biyaha laga soo saaro dhulka ilaa shirkadaha warshadaha batroolka iyo gaaska dabiiciga ah iyada oo la sii marinayo tuubooyinka khadka.Tuubooyinka laynka ah waxaa ka mid ah tuubooyinka aan xidhnayn iyo tuubooyinka birta ah ee alxanka leh.Cidhifyada tuubooyinku waxay leeyihiin cidhifyo siman, cidhifyo dunsan iyo cidhifyada godka;isku xidhkeeda Habka waa alxanka, isku xidhka isku xidhka, xidhiidhka godka, iwm. Tiro badan oo dhuumo ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qaado dareeraha, sida saliidda, gaaska dabiiciga ah, biyaha, gaaska, uumiga, iwm. Intaa waxaa dheer, marka foorarsiga iyo xoogga torsion. waa isku mid, miisaanku waa ka fudud yahay, sidaas darteed waxaa sidoo kale si ballaaran loo isticmaalaa soo saarista qaybaha farsamada iyo qaababka injineernimada.Waxa kale oo inta badan loo isticmaalaa in lagu soo saaro hub kala duwan, fuustooyin, iyo madaafiic.
Kaarboon C 0.17% - 0.2%
Si 0.17% ilaa 0.37%
Mn 0.35% ilaa 0.65%
Fosfooraska P ≤ 0.035%
nikkel ≤ 0.25%
Xoogga xajinta σ B (MPA) ≥ 410 (42)
Awood-soo-saarka σ s (MPA) ≥ 245 (25)
Kordhinta δ (%) ≥ 25
Dhimista aagga ψ (%) ≥ 5,
Adag daawaynta kulaylka ma jirto, ≤ 156hb
Ku saabsan alaabtayada:
Dhexroor kabaxsan DN10~DN1200,1/8"~100",6mm~2500mm
Dhumucda darbiga SCH5~SCH160,STD,XS,XXS,1mm~150mm
Dhererka 12m,11.8m,6m,5.8m,ama sida macaamiisha looga baahan yahay
Daaweynta dusha sare Rinjiyeynta madow, varnish madow, saliid hufan, galvanized kulul, 3PE, daahan epoxy, BE, PE.iwm.
1. Dhuumaha socodka dareeraha cadaadiska hoose iyo dhexe
2. Tuubada Casing
3. Dhuumaha kululeeyaha 4. Batroolka iyo warshadaha gaaska dabiiciga ah
5. Warshadaha kimisteriga 6. Warshadaha korontada
Tirada Dalbashada ugu yar:Marka loo eego shuruudaha macmiilka
Shuruudaha lacag-bixinta:L/C, T/T, Western Union, iwm.
API5LGR.B LINE TUBE TUBE OO XANUUN BADAN
API 5L Gr.B ka kooban kiimikaad iyo hantida farsamada:
API5LGR.B Tuubooyinka khadka waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado saliidda, uumiga, iyo biyaha laga soo saaro dhulka ilaa shirkadaha warshadaha batroolka iyo gaaska dabiiciga ah iyada oo la sii marinayo tuubooyinka khadka.
Dhexroorka dibadda 1/2"-24"
Dhumucda darbiga SCH40/SCH80
Dusha sare Rinjiyeynta madow
Isku xirka iskuxiraha
TUBEE BIr ah oo aan toos ahayn oo kulul
HABKA SHAXDA SOCODKA
Tiro badan oo dhuumo ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qaado dareeraha, sida saliidda, gaaska dabiiciga ah, biyaha, gaasta, uumiga, iwm. Intaa waxaa dheer, marka foorarsiga iyo xoogga jirku ay isku mid yihiin, miisaanku waa fudud yahay, sidaas awgeedna si weyn ayaa loo isticmaalaa. soo saarista qaybaha farsamada iyo dhismayaasha injineernimada.Waxa kale oo inta badan loo isticmaalaa in lagu soo saaro hub kala duwan, fuustooyin, iyo madaafiic.
Gaadiidka dhuumaha dareeraha ah
Gaadiidka dhuumaha gaaska dabiiciga ah
Gaadiidka dhuumaha shidaalka
Injineerka dhuumaha badda.
1. Xidhmada xidhmo
2. Dhammaadka go'an ama dhamaadka cad ama loo digay sida uu doonayo iibsadaha.
3. Calaamadaynta: sida ku cad codsiyada macmiilka.
4. Rinjiyeynta daahan varnish on tuubada.
5. Koofiyadaha caaga ah ee darafyada.
Hore: Dhuumaha birta ee kulaylka lagu daaweeyay
Xiga: Dhuumaha Biraha ee Galvanezed ee aan Xumaan lahayn
QABOW TUBO QARAN OO AAN XUL AH
Rinjiga gaduudan ee ka hortaga dabka
Dhuumaha Haydarooliga, Dhuumaha Birta ee Tooska ah ee aan Xirnayn, Dhuumaha Kaarboon Aan Xumaan lahayn, St52 Dhuumaha aan Xumaan lahayn, At 179 Tube aan cillad lahayn, Birta Kaarboonka ee aan Xumaan lahayn,